ady amin'ny herisetra - Fikambanana miisa 17 no nahazo fiofanana avy amin’ny ECPAT
Ady amin’ny herisetra – Fikambanana miisa 17 no nahazo fiofanana avy amin’ny ECPAT
Posted on: February 25, 2020 Written by: Book News Categorized in: Malagasy, Social
Fikambanana miisa 17 avy eto Antananarivo sy Antsirabe no niofana mahakasika ny herisetra mifotra amin’ny maha lehilahy sy ny maha vehivavy na ny VBG sy ny ady amin’ny herisetra mpahazo ny ankizy na ny ESE teny Andavamamba ny faran’ny herinandro teo.
Mivondrona ireo fikambanana mpiaro ny zon’ny ankizy
Fikambanana miisa 17 mivondrona ao anatin’ny « plateforme » izay mpiaro ny ankizy isan’izany ny PFSCE na ny «Plateforme de la société civile pour l’enfance » avy eto Antananarivo sy ny OSCAPE na ny « Organisation de la société civile pour l’enfance » avy any Antsirabe no nandray anjara amin’ity fiofanana ity.
Fikambanana tsy miankina amin’ny Fanjakana misehatra amin’ny ady amin’ny herisetra mpahazo ny ankizy na ESE ny Ecpat. Natao araka izany izao fiofanana izao mba ho fampihetsena ireo mpiara miasa ireo hiaraka hiady sy hisoroka ny herisetra mifotra amin’ny maha lehilahy sy ny maha vehivavy na ny VBG (violence basée sur le genre) izay mifandray amin’ny fanararaotana mianjady amin’ny ankizy na ny ESE.
Raha mijery ny zava-misy eny amin’ny fiarahamonina dia ny ankizy vavy no tena iharan’ilay fanararaotana mamoafady. Ity faran izay miendrika ny VBG.
Ireo herisetra mpahazo ny ankizy (ESE)
Raha ny ESE manokana dia saika hita manerana an’i Madagasikara saingy ao Nosy Be no ahitana taha ambony indrindra, araka ny fikarohana nataon’ny Ecpat ny taona 2018. Ahitana tranga maro ny ESE toa ny famporisihana ny ankizy hivarotena, fampanambadiana ankizy vavy, ny fampirisiana ny ankizy hanao firaisana ara-nofo, ny fanolanana, ny fanajana vahiny ka hanomezana azy ny ankzy vavy mba hiara hatory aminy. Miseho any an-tsekoly ihany koa izany toa ny fanaovana firaisana ara-nofo ho takalona naoty. Misy antony ara-piarahamoninana no mahatonga izany toa ny tsy fahampian’ny fitiavana eo amin’ny ankizy, ny tsy famporisihana ny anikizy mba hanana ny fahatokisan-tena. Anisany antony ihany koa nyy ara-toekarana toa ny famorisihana ny ankizy hivarotena nohon’ny fahantrana. Eo ihany koa ny antony ara-pomba misy toa ny fanolarana ny ankizy ho lasa tolotra ho fanajana ny vahiny. Ny tsy fahampian’ny fanabeazana sy ny tsy fahalalan’ny ankzy ny zony, ny tsy fahafantarn’ny olona ny lalàna no isan’ny fototra mahatonga ny ESE.
Ireo mpisehatra momban’ny ady amin’ny herisetra mpahazo ny ankizy. cc :ECPAT
Ny andrasana amin’ireo mpiofana ireo dia ny ahafantarany ny VBG sy ny ESE satria
« misy ireo olona misalsala nohon’ny fivoahan’ilay lalàna momban’n VBG eto Madagasikara. Mandray anjara amin’ny fanazavana momban’ny VBG ny Ecpat France ka nomena izany aloha ireto fikambanana ireto ary anjaran’izy ireo indray no manaparitaka »,
hoy i Ratianarimanana Heriniaina, tompon’andraikitra eo anivon’ny ECPAT.
« Fantatry ireo mpiofana araka izany ny atao hoe VBG. Ity farany izay resaka fitsinjarana asa sy ny tsindry izay iainan’ny lehilahy sy ny vehivavy eny anivon’ny fiaraha monina »,
hoy hatrany i Ratianarimanana Heriniaina.
Andrasana amin’ireto mpiofana ireto ihany koa ny fampiharana ireo fahalalana izay azony.
Nilaza i Vaniala avy amin’ny fikambanana TIA HINA fa
« Maro ny zavatra voaray nandritran’ny fiofanana toa ny fahafantarana ny diakn’ny miralenta sy ny genre araka ny tokony ho izy fa tsy ilay vohizina eny an-dalana. Eo ihany koa ny fahafantarana ny atao hoe VBG. Zava-dehibe ny fiofanana satria mampisy fiovana eo amin’ny mpiofana aloha ary azo hampiharina tsara amin’ny fomba fitantanana ny fikambanana sy hanovana ny fomba fijerin’ny fiarahamonina ».
Ankoatra izay dia nambaran’i Razanajaona Manovosoa avy amin’ny OSCAPE :
« Hitondra fiovana amin’ny fiarahamonina sy ny ankizy izao fiofanana izao satria miresaka momban’ny zara eo amin’ny maha lehilahy sy ny maha vehivavy ary ny fandravana ireo hevi-draiitra rehetra manodidina an’izay ».
Tagged as: ecpatfrance ECPATMadagascar ESE GBV herisetrampahazonyankizy VBG zonnyakizy
Previous post Festival environnemental Diego 2020 – Un engagement pour faire de Madagascar “l’Île Verte”
Next post Se battre pour réduire les risques liés aux catastrophes : pourquoi et comment ? – Partie I
0 comments on “Ady amin’ny herisetra – Fikambanana miisa 17 no nahazo fiofanana avy amin’ny ECPAT” Add yours →